Ogaden News Agency (ONA) – 114 ta Qur’aanka kariimka ah oo Xagardheere Lagu Khatimay.
114 ta Qur’aanka kariimka ah oo Xagardheere Lagu Khatimay.
Posted by Dulmane	/ March 27, 2016
Waxaa xerada qoxotiga Xagardheer ee deegaanka Faafi kusoogaba gaboobay maanta oo ay taariikhdu kubegnayd 26/3/16 akriska Qur’aan ka kariimka ah oo socday mudo 30 bari ah oo ay akhrinayeen Ururka Culimada Somalida Ogadeniya UCSO laantiisa kahawlgasha Deegaanka Faafi,quraankan oo si joogta ah ay u akhriyaan culimada ayaa Waxaay dhameeyeen bishan gudaheeda 7 jeer.
quraankan oo ay ujeedadiisu ahayd kutaageerida halganka xaqa ah ee kasocda Ogadeniya ayaa waxay culimada deegankan goosteen inay bilkasta dhawr jeer dhameeyaan, waxaa intaas usiidheer culimada inay dhamaan bulshada ree Ogadeniya iyo mida somaliyeedba sijoogta ah qur’aanka ubaraan.
waxay sidoo kale booqdaan dadka danyarta ah iyo kuwa xanuunsan ee Deegaanka qaxootiga iyaga oo gaadhsiiya duco iyo deeq waxay heli karaan. Sikastaba ha ahaatee culimada ayaa door muhiim ah ka ciyaara baahida bulshada dhanka barida quraanka kariimka ah iyo guud ahaan arimaha diinta iyagoo dulmanayaasha ree ogadenia na lagarabtaagan taagooro hiil iyo hooba leh.